Ciidamada Puntland Oo Gacanta Ku Dhigay Rag Ajaaniib Ah – Goobjoog News
Ciidanka badda maamulka Puntland ayaa dad isugu jira Soomaali iyo Ajaanib kusoo qabqabtay howlgal ay ka sameeyeen xeebta Garacad ee gobolka Mudug.
Guddoomiyaha deegaanka Garacad C/nuur C/laahi Xirsi oo wareysi siiyey Goobjoog News, ayaa sheegay in ay ciidamada gacanta ku dhigeen Nin Soomaali ah iyo sidoo kale Saddex nin oo Ajnabi ah una dhashay dalka Yemen.
Wuxuu sheegay guddoomiyaha in raggan ay u sheegeen in dooni ay ka shidaal beeshay, sidaasina ku yimaadeen xeebta Garacad, balse markii lasii baaray la waayey Doon ay wateen waa sida uu hadalka u dhigaye.
“Raggan ajaaniibta ah waxa ay u dhasheen Yemen, waxaana ninka Soomaaliga ah ee la socdana uu kasoo jeedaa deegaannada Puntland, doon ayeey sheegeen iney ka shidaal goosatay, laakiinse markaan raadinay ma aan arag wax doon ah, hadana baaritaan ayaa lagu wadaa” ayuu yiri guddoomiyaha deegaanka Garacad.
Puntland ayaa ciidamo dheeraad ah waxay ku daabushay 48-kii saac ee lasoo dhaafay ciidamo badan oo la sheegay iney amniga xaqiijinayaan.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Oo Ka Tacsiyadeeyey Geerida Xildhibaan Sheekh Aadan Madeer
Tpmzda ympkuh Cialis medication printable cialis coupon
Yuqnmy lgsdct Buy cialis discount is there a generic for cialis
Hhupsg kgnwwm cialis for sale cialis without a prescription...
Gljxnu ywtiqa ed drugs cialis price costco...
Lxngrb onnxcy Generic viagra us cialis without prescription...
Mbmhep ubpyje discount viagra canadian pharmacy cialis...
Knwwxh nvmbyz cialis price how much is cialis...